Alaab -qeybiyeyaasha iyo Warshadda - Soo -saareyaasha Alaabada Shiinaha
FB-47 Split Set Bolt waxaa loo adeegsadaa xasilinta suunka isku-xirka taageerada weyn ee mashaariicda dhulka hoostiisa ama ka sarreeya ee miinooyinka, godadka dhulka hoostiisa ama meelaha dhaadheer ama meel kasta oo looga baahan yahay taageero dhulka lagu kalsoonaan karo, gaar ahaan horumarinta iyo wax-soo-saarka jumbo. Qalabkayaga FB-47 Split Set Bolt waxaa lagu sameeyay xarig bir aad u xoog badan kaas oo si gaar ah loo sifeeyay oo leh heer aad u hooseeya Si & P oo ku jira qaybaha kiimikada, waxay ka dhigi doontaa bool si wax ku ool ah oo ku habboon dhagxaanta taageeraya, waxayna kaa caawineysaa inaad yeelato tayo wanaagsan galvanizing . Dhanka kale, iyada oo leh alxanka baabuurka ee PLC ee koontaroolka leh, boolku wuxuu yeelan doonaa waxqabad aad u wanaagsan marka la geliyo dhagaxyada.
FB-39 Split Set Bolt waxaa ugu horeyn loo adeegsadaa sugidda mesh strata iyadoo lagu rakibayo boolal jira 47mm oo jira iyadoo lala kaashanayo saxan yar. Dhererka dhaadheer ayaa sidoo kale loo isticmaalaa taageerada dhulka asaasiga ah marka la qodayo godadka dhexroorka yar. Qalabkayaga FB-39 Split Set Bolt waxaa lagu sameeyay xarig bir ah oo xoog badan kaas oo si gaar ah loo sifeeyay oo leh heer aad u hooseeya Si & P oo ku jira qaybaha kiimikada, waxay ka dhigi doontaa bool si wax ku ool ah oo ku habboon dhagxaanta taageeraya, waxayna kaa caawineysaa inaad yeelato tayo wanaagsan galvanizing . Dhanka kale, iyada oo leh alxanka baabuurka ee PLC ee koontaroolka leh, boolku wuxuu yeelan doonaa waxqabad aad u wanaagsan marka la geliyo dhagaxyada.
FB-33 Split Set Bolt waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu dhiso taageerada dhulka marka loo baahdo hawlgallada macdanta gacanta. Qalabkayaga FB-33 Split Set Bolt waxaa lagu sameeyay xarig bir aad u xoog badan kaas oo si gaar ah loo sifeeyay oo leh heer aad u hooseeya oo Si & P ah oo ku jira qaybaha kiimikada, waxay ka dhigi doontaa bool si wax ku ool ah oo ku habboon dhagxaanta taageeraya, waxayna kaa caawineysaa inaad yeelato tayo wanaagsan galvanizing . Dhanka kale, iyada oo leh alxanka baabuurka ee PLC ee koontaroolka leh, boolku wuxuu yeelan doonaa waxqabad aad u wanaagsan marka la geliyo dhagaxyada.
Combi Plate waa nooc ka mid ah saxan isku -dhafan oo loo adeegsado Split Set Bolt (Friction Bolt Stabilizer) si loo helo aag weyn oo lagu taageero dhagaxa, oo loo sameeyo nidaamka set -ka ee kala -goynta leh waxqabad taageero oo ka wanaagsan. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagaajinta iyo mesh dhalista, iyo iyadoo loop hanger saaran yahay saxanka sare, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la sudho hawo -qaadashada ama nidaamka nalalka iwm.
Duo Plate waa mid ka mid ah saxan isku jira oo wada isticmaalaya Split Set Bolt (Friction Bolt Stabilizer) si kor loogu qaado aagga taageera ilaa dhagaxa, oo laga dhigo nidaamka taageera oo dhan waxqabad taageero oo wanaagsan. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa hagaajinta iyo mesh dhalista, iyo iyadoo loop hanger saaran yahay saxanka sare, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la sudho hawo -qaadashada ama nidaamka nalalka iwm.
BILT -KA HILITAANKA SILITAANKA UGU WANAAGSAN (Kabaha Xasilinta Xallinta)
Kala qaybi qalabka dhegaysiga dhejiska ee adeegga ee laga heli karo dhammaan Qaababka iyo ilaa 900mm. Iyagu maahan taageero dhulka ah, laakiin waxay bixiyaan faa'iidooyin isku mid ah rakibidda sida boodhka isku dhaca. Waxay ku yimaaddaan dhexroor dhuuban oo isku mid ah, waxayna isticmaalaan taargooyin isku mid ah. Waxaa loo isticmaalaa in lagu taageero fiilooyinka, tuubooyinka, tuubooyinka iyo Mesh Mine. Waxyaalaha khafiifka ah sida tuubada hawo -qaadashada ayaa laga yaabaa in laga soo laalaado loop -ka saxan -sidda.
MESH WIIL WED
Mesh loo adeegsado codsiga taageerada dhulka, wuxuu bixin karaa daboolida taageerada dusha sare ee dhagaxa dabacsan ee u dhexeeya boorarka dhagaxa iyo taargooyinka mashaariicda Macdanta, Tunnel -ka iyo qoditaanka Jiirada. Waxaa si wada jir ah loo adeegsadaa Split Set bolts iyo taargooyinka sita, waxay ka dhigi kartaa nidaamka taageerada oo dhan mid xasilloon oo badbaado leh.
FB-42 SOLIT SET BOLT (Xasilinta Khilaafka)
FB-42 Split Set Bolt waxaa loo adeegsadaa xasilinta xarkaha isku-dhafan ee taageerida FB-47 Split Set Bolt oo loogu talagalay mashaariicda dhulka hoostiisa ama ka sarreeya ee miinooyinka, godadka dhulka hoostiisa ama meelaha dhaadheer ama meel kasta oo looga baahan yahay taageerada dhulka ee la isku haleyn karo, gaar ahaan horumarinta jumbo farsameynta iyo wax soo saarka. Qalabkayaga FB-42 Split Set Bolt waxaa lagu sameeyay xarig bir aad u xoog badan kaas oo leh heer aad u hooseeya Si & P oo ku jira qaybaha kiimikada si loo sameeyo waxqabad kaamil ah taageerada dhulka, lagana caawiyo helitaanka tayo wanaagsan xagga galvanizing.
Threadbar Bolt oo loo adeegsado barxadda ku dheggan ama si buuxda u daboolan saqafyada iyo codsiyada xirmidda feeraha, oo leh astaanta dusha sare ee feeraha ah, boodhka dunta ayaa bixin kara isku -darka isku -darka cusbada iyo wareejinta rarka. Waxa kale oo aad loogu adeegsadaa taageerada dhulka ee macdanta, tunnel -ka iyo mashaariicda jiirada
Roundbar Bolt wuxuu leeyahay dhammaadyo dunsan, waxaa loo isticmaali karaa sidii si buuxda loo duubay ama loo tilmaami karo nidaamyada ku xiran. Iyada oo leh noocyo kala duwan oo ah lowska iyo dhaqeyaasha, si dhakhso leh ayaa loo rakibi karaa waxayna u muuqatay mid ka mid ah alaabooyinka ugu waxtarka badan ee wax -ku -oolka dhulka ee warshadaha macdanta iyo tunnel -ka.
Xarigga “W” ayaa caadi ahaan la adeegsadaa marka taageero dheeraad ah loo baahdo iyada oo lala kaashanayo mesh iyo boolal dhagaxa. Suumankaan birta ah waxaa lagu dhajiyaa dhagaxa dhagaxa iyadoo boolalku u muuqdaan inay la jaanqaadaan dusha dhagaxa. Waxa kale oo aad loogu adeegsadaa arjiga taageerada dhulka gaar ahaan meelaha muhiimka ah.